झुटा आश्वासन मेरो शब्दकोषमा छैन :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
झुटा आश्वासन मेरो शब्दकोषमा छैन
इटहरी । ‘हेभीवेट’ नेताहरू उम्मेदवार भएका कारण सुनसरीमा यतिबेला चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । नेपाली कांग्रेसका शालिन नेता एवं वर्तमान अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उम्मेदवार भएका कारण यतिबेला सुनसरी ४ ले प्रदेश १ कै ध्यान तानेको छ । गत साता क्षेत्र नम्बर ४ को हरिनगरमा आयोजित एक चुनावी कार्यक्रममा नेता कार्कीले जनसमक्ष के के कुरा राखे ?
शासन व्यवस्था कस्तो हुने ? भन्ने वर्षांै लामो विवादलाई समाप्त गर्दै मुलुक विकास निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अबको मुख्य एजेन्डा भनेकै विकास हो । यो क्षेत्रको विकासमा कसको पहुँच पुग्छ ? कसले यहाँका समस्या समाधान गर्छ ? त्यो कुरा तपाई जस्ता सचेत मतदाताले बुझिसक्नुभएको छ । यसबारे म धेरै बोल्न चाहन्न । जाने बुझेर नै तपाईहरूले मतदान गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ । म नसक्ने कुरा बोल्दिनँ, झुटा आश्वासन मेरो शब्दकोषमा छैन । म जे बोल्छु त्यो गर्छु ।
कोसी गाउँपालिकाको लामो समयदेखिको मुख्य चाहना सिटी हल निर्माण होस् भन्ने थियो । त्यसका लागि स्थानीयस्तरबाट तीन बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । मैले ५० करोड रुपैयाँ लागतमा सिटी हल निर्माण कार्य अघि बढाएँ । सायद अहिले यसको सर्भेको काम भइरहेको छ । म चाहन्छु, यो सिटी हल प्रदेश १ कै नमुना बनोस् । नेपाली कांग्रेसले अंगालेको सिद्धान्तअनुरूप मुलुकमा शासन व्यवस्थाको निर्माण भएको छ । सिद्धान्त जसको हो, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि उसैको हो । चुनाव जित्यो भने मात्रै नेपाली कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्नसक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन कार्यकर्ताहरू मतदानको दिनसम्म घडीको सुई जस्तै अविश्राम परिचालित हुनु जरुरी छ ।
राजनीति विकासविनाको गफ भएको छ । म त्यो तोड्न चाहन्छु । राजनीति भनेको पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि हो भन्ने मान्यतालाई सुनसरीमा नमुना बनाएर देशव्यापी सन्देश फैलाउन चाहन्छु । प्रदेश १ हाम्रा नेताहरू जो मुलुकका लागि अदर्शपुरुष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कर्मभूमि हो । बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता आदर्श पुरुषहरूको कर्मभूमिलाई मुलुककै विकासको नमुना बनाउन मैले सुनसरी रोजेको हुँ । कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री या मन्त्री बनाउनभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्न तपाईहरूले जागरण अभियान चलाउनोस् ।
Tarun Khabar0response सोमबार,२७ कार्तिक २०७४ 1593 Views